Ndị ndụmọdụ ụlọ ọrụ mba ofesi na Netherlands - Law & More
N'ime ndị ahịa anyị bụ ezinụlọ Dutch na ezinụlọ azụmaahịa mba ụwa, bụ ndị nwegoro ogo dị ukwuu na ụlọ ọrụ ha. Udiri ndi a emebeworị ma ọ bụ guzobe, ma ọ bụ na-eme atụmatụ ime nke a, ụlọ ọrụ Dutch na-alụbeghị di ma ọ bụ nke nwere ọtụtụ ezinụlọ iji hazie ọrụ na itinye ego ha n'ụzọ doro anya na njikwa.
NIILE KPỌRỌ NKWUKWU EGO?
Law & More na-enyere ndị ahịa aka na ọfịs ndị ezinụlọ ha na ọrụ iwu kwadoro. Anyị na-agbakọta ihe ọmụma anyị na ahụmịhe anyị dị ka ndị ọka iwu onwe onye Dutch na ndị ndụmọdụ ụtụ isi n'ihe metụtara ụtụ isi na atụmatụ nke Dutch, nnabata ụtụ isi Dutch, ihe ndị metụtara ụlọ Dutch na inwe azụmahịa. A na-enyere ụdị enyemaka a site na imekọ ihe ọnụ na ndị ọkachamara n'ihe gbasara njikwa itinye ego, ịhazi ego na ịchekwa ego ọtụtụ oge enyerela ezinụlọ ahụ aka. Ahụmahụ anyị sitere na ihe metụtara nhazi ụlọ ọrụ ezinụlọ, ọchịchị ezinụlọ, isi na mkpebi esemokwu na Netherlands.
Anyị na ndị ọkachamara na ngalaba mmekọrịta nwere mmekọ anyị na anyị esonyere n’ọrụ anyị n’ichepụta ụzọ dị iche iche n’okwu iwu na-akwadoghị, nke ezinaụlọ Dutch na mba ụwa na-ezute.
Anyị na-enyere ndị ahịa aka ịmalite ụlọ ọrụ ezinụlọ na Netherlands. Anyị na-arụkwa ụlọ ọrụ ezinụlọ dị na mba ụwa na-arụ ọrụ na arụzigharị arụmọrụ zuru ụwa ọnụ maka ezinụlọ na ụlọ azụmaahịa. N'ikpeazụ anyị na-atụle arụmọrụ na nhazi nke ọfịs ezinụlọ guzobere, bụ ndị na-achọ ndụmọdụ maka ịmụba na imeziwanye ọrụ dị iche iche enyere.